आह! क्लियोपेट्रा!! परमेश्वरले रानी, मिश्र अन्तिम फिरऊन र इतिहासमा सबैभन्दा सुन्दर महिला को एक. त्यसैले, यसलाई सधैं कसैले उनको बारेमा एक स्लट खेल विकास गर्न लाग्नुभएको थियो कि अपरिहार्य थियो. र यहाँ छ. Igt द्वारा यस स्लट खेल एक क्लासिक र सबै समय को सबैभन्दा लोकप्रिय स्लट खेल मध्ये एक छ. यो एकदम केहि वर्ष पछि जारी तर यो अझै पनि यो आफ्नो उन्नत ग्राफिक्स र खेल इन्जिन संग सबै ती नयाँ स्लट खेल बीचमा आफ्नै छ पकड व्यवस्थित छ. त्यसैले, के यो स्लट खेल यति लोकप्रिय बनाउँछ? कसरी यी सबै वर्ष को लागि माथि रहेका रूपमा? पत्ता लगाउन समय.
अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रौद्योगिकी वा igt, यसलाई थप लोकप्रिय जानिन्छ, लस भेगास मा आधारित थियो मूलतः एक अमेरिकी खेल कम्पनी. यो यस्तो विंसी हीरे रूपमा स्लट खेल बनाउनको लागि जानिन्छ, 100K पिरामिड आदि.
क्लियोपेट्रा एक धेरै उज्ज्वल र रंगीन स्लट छ. यो एक फिरऊनलाई बारेमा भएकोले, यो स्लट यसलाई एक distinctively मिश्रको नजर छ. गोल्फ रंग टोन साँच्चै राम्रो काम गर्दछ. यो प्रकारको यो खेल शाही र महान् हेर्न बनाउँछ, दायाँ यो हुन मानिन्छ कसरी गर्ने. पृष्ठभूमि संगीत पनि एकदम राम्रो छ र विषय संग पूर्ण मा Blends. दुवै अडियो र भिजुअल आफ्नो अचम्मको काम को लागि igt गर्न Kudos.
क्लियोपेट्रा छ5रील र 20 paylines. The slot is playable fromameagre 20p per spin to an enormous 100£ per spin. आधार खेल बोरिंग पक्षमा अलिकति छ. यो त्यहाँ छैन किनभने साँच्चै धेरै कार्य यसलाई मा जा. गेम volatility कहीं छ मध्यम बीच. आधार खेल माथि उल्लेख रूपमा थोडे बोरिंग छ र तपाईं सुक्खा spells धेरै मार्फत जाने गर्नुपर्छ.
जहाँ बोनस दौर मा आउन तर छ. र तिनीहरूले rollicking मजा भरिएका छन्. विशेष गरी क्लियोपेट्रा मुक्त spins सुविधा. लागि यो तपाईं सकेसम्म धेरै प्राप्त गरेको छ बाहिर हेर्न गर्छन् 180 एक 3x गुणक साथ निःशुल्क spins. There is alsoascatter symbol landing3जो को रील मा तपाईं दिन्छ 15 मुक्त spins. यी spins बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा यी spins retriggered गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई छ.
यो क्लियोपेट्रा प्रतीक पनि जंगली प्रतीकको रूपमा सेवा र स्क्याटर प्रतीक बाहेक अन्य सबै प्रतीक को प्रतिस्थापन को रूप कार्य.
क्लियोपेट्रा समय को एक लामो अवधिको लागि मनोरंजन राख्छ कि रमाइलो स्लट खेल हो. तर मात्र, यो पनि केही ठूलो पेआउट प्रदान. त्यहाँ धेरै तपाईं एक स्लट मा माग्न सक्ने बायाँ छैन. त्यसैले, बस अनलाइन प्राप्त र यो एक स्पिन दिन. तपाईंले यसलाई प्रेम छौँ.